Sida loo nadiifiyo alaabta jikada | Qurxin
Sida loo nadiifiyo alaabta jikada
Maria vazquez | 13/10/2021 10:00 | Jikada
Ku ilaali nadaafadda wanaagsan jikada waa lama huraan. Waa meesha aan wax ka qabanno oo aan ku diyaarinno cuntada tanina waa inay noqotaa sabab ku filan in la joogteeyo nadaafadda maalinlaha ah. Laakiin marka lagu daro tan, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la ogaado sida loo nadiifiyo alaabta jikada si qoto dheer.
La qabsiga nadiifinta jikada kadib diyaarinta cuntada iyo qaadashada toban daqiiqo habeen kasta nadiifinta meeshan waxay ku filnaan kartaa in la joogteeyo heerka ugu wanaagsan ee nadaafadda. Caadiyan ma sameysaa? Maanta waxaan si qoto dheer uga hadlaynaa nadiifinta jikada, joojinta nadiifinta alaabta guriga, sagxadaha iyo qalabka.
2 Meelaha birta aan lahayn
Qoryaha ayaa kaalin weyn ku leh jikadaheena. Waa mid ka mid ah agabyada ugu caansan soo saarista alaabta guriga iyo mid ka mid ah kuwa aadka loo raadsado iyada oo ay ugu wacan tahay iska caabbinta iyo adkeysiga. In kasta oo laga maarmi doono dayactir wanaagsan si aysan u lumin muuqaalkooda wanaagsan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad nadiifiso alaabta jikada maalmo kale maro yar oo qoyan si looga saaro boodhka iyo wasakhda ku urursan badiyaa kala -goysyada iyo gargaarka. Dhammaadka alaabta jikada waxay ka ilaalisaa xoqitaanka iyo huurka suurtogalka ah. Si kastaba ha ahaatee, marna laguma talin doono in aad isticmaasho biyo xad -dhaaf ah ama alaabta wax -qarxisa sida warankiilo ama ammonia si aad u nadiifiso, adigoo awood u leh inaad ka fogaato.
Alaabta jikada aad bay ugu badan tahay wasakhda iyo dufanka, sidaa darteed toddobaadkiiba hal mar ayay ku habboonaan doontaa in la sameeyo nadiifin qoto dheer oo leh suuf wax lagu dhejiyo iyo biyo diiran iyo saabuun khafiif ah. Haddii aad u oggolaato baruurtu inay ku badato - waa inaanan gaarin - waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la isticmaalo khal cad si wax looga qabto. Waxaad u isticmaali kartaa iyada oo aan la nadiifin ama wax yar lagu qasi jiray maro si loo nadiifiyo armaajooyinka. Markaad dhammaysato, raaci armaajooyinka, ku masax maro qalalan, oo ka tag jikada si aad u qalajiso.
Meelaha birta aan lahayn
Isbeddellada cusub ee qurxinta ayaa kordhiyay doorka biraha aan birta lahayn ee guryaheena. Waxaa intaa dheer helitaanka maaddadan qalabka guriga yar iyo weyn, Waxa kale oo aan ku samaynaa miisaska miisaska iyo alaabta jikada ee u eg warshadaha.
Birta aan macdanta lahayn waa shay xoogaa dalool leh si uusan u nuugin qashin badan. Nadiifintu waa wax fudud, inkasta oo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato sida iyo waxa aad ku nadiifiso si aadan u waxyeeleyn. Waa maaddo si fudud u xoqaysa, markaa waa inaad mar walba isticmaashaa a maro microfiber jilicsan in la sameeyo
Marka lagu daro marada, waxaad u baahan doontaa alaab nadiifin ah. Waxaad u isticmaali kartaa badeecooyin gaar ah birta birta ah, laakiin muhiim maahan. Waxaa jira xalal badan oo guriga lagu sameeyo si looga fogaado isticmaalka kiimikooyinka noocaas ah, sida baking soda iyo khal. Kuwa hore waxaa loo isticmaalaa sida budo oogada, waxaana lagu qasi karaa biyo ama khal si loo nadiifiyo oo loo marsiiyo maaddadan.
Si loo nadiifiyo saxanka, oo ay sida caadiga ah nuuraddu iyo dufanku ku ururaan, waxaan marka hore isticmaali doonnaa bicarbonate -ka, kaas oo aan ku faafin doono isbuunyo qoyan isla jihada qaabka dhammaadka. Kadib, adoo isticmaalaya dhalada buufinta Waxaan saydhin doonaa khalka oo ha u dhaqmo 10 daqiiqo. Khalku wuxuu la falgali doonaa bicarbonate -ka waxaana samaysmi doona xumbo naga caawin doonta inaan ka saarno dhammaan wasakhda ku dheggan dusha weelka. 10 daqiiqo ka dib, waxaan ku qasbanaan doonnaa oo kaliya inaan ku mayrno saxanka biyo oo aan ku qalajinno maro si aan uga dhigno mid nadiif ah oo dhalaalaya.
Nadiifinta iyo jeermiska jeermiska qaboojiyaha toddobaad walba waa lama huraan si loo helo degganaansho maskaxeed in cuntada aad ku hayso ay ku jirto xaaladda ugu fiican. Ka faa'iidayso maalinta aad iibsanayso, marka ay ku dhowdahay faaruq iyo ka hor inta aan la buuxin, si loo fududeeyo.
Si aad u nadiifiso talaagad madhan tan iyo ka saar khaanadaha, khaanadaha, khaanadaha iyo wax kasta oo laga saari karo. Diyaarso weel ama ku shub saxanka biyo diirran oo ku dar durdur wanaagsan oo khal cad ah iyo qaaddo soodhaha dubista ah. Ku nadiifi dhammaan walxaha aad ka soo qaadday qaboojiyaha isku dar ah oo maro ku qallaji.
Markaas diyaari a buufinta biyaha iyo khalka cad. Isku dar walxaha darbiyada qaboojiyaha oo ku nadiifi gudaha isku darkaan iyo suufka wax lagu xoqo. Ku qallaji maro nadiif ah oo qoyan biyo oo hubi inaad ka saarto wixii wasakh ah kala -goysyada.
Ka sokow nadiifinta jikada ka dib isticmaalka waa habeen walba lagu taliyo Ku nadiifi armaajooyinka jikada maro qoyan oo miiska dushiisa ku dhaji suuf wax lagu xoqo. Waxaad samayn kartaa tan adiga oo u oggolaanaya xalka nadiifinta ee loo isticmaalo in lagu nadiifiyo saxanka si uu u dhaqmo 10 daqiiqo. Markaa waa inaad maroojisaa sagxadda si aad u ilaawdo jikada ilaa maalinta ku xigta.
Toddobaad walba, nadiifin aad u qoto dheer ma dhaawici doonto jikada kuwaas oo isugu jira nadiifinta qaboojiyaha iyo tan qalabka intiisa kale, raacaya tillaabooyinkii aan kugula talinay waqti dheer kahor Decoora. Sidoo kale waa inaad daryeeshaa gudaha armaajooyinka ugu yaraan bishiiba hal mar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Meelaha » Jikada » Sida loo nadiifiyo alaabta jikada
Ku qurxi aqalkaaga Vinyls
Haddii aad raadineysid vinyl raqiis ah oo lagu qurxiyo gurigaaga. Ha moogaanin uruurintan weyn.
Vinyl-yada ugu fiican
Waraabinta cawska dayrta
Sida looga saaro wasakhda biyaha ee daaqadaha iyo muraayadaha
Soo hel qodobadii ugu dambeeyay ee ku saabsan qurxinta iyo guriga.